Kenya: Kama aar-gudan doono Soomaaliya, waxaa raadineynaa xal diblomaasiyadeed - Home somali news leader
Home NEWS Kenya: Kama aar-gudan doono Soomaaliya, waxaa raadineynaa xal diblomaasiyadeed
Kenya: Kama aar-gudan doono Soomaaliya, waxaa raadineynaa xal diblomaasiyadeed
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay sameyn doonto koox raadisa xal diblomaasiyadeed oo dhex mara Kenya iyo Soomaaliya, sida uu shaaciyay Afhayeenka dowladda Cyrus Oguna.
Cyrus Ogona ayaa sheegay aanay sameyn doonin wax aar-gudasho ah oo la mid ah tallaabadii ay qaaday dowladda Soomaaliya oo ay xiriirka ugu jartay Kenya.
“Waxaan nahay ummad sareysa, ma sameyn karno wax la mid ah wixii ay Soomaaliya sameysay, haddaan sidaa yeelno waxay u muuqaneysaa aar-gudasho, waxaan u ogolaan doonaan inay arrintan la wareegaan IGAD iyo Comesa”ayuu yiri Ogona.
Wasaaradda Arrimaha dibadda Kenya ayaa sheegtay in aanay weli wax xiriir rasmi ah ka helin Soomaaliya oo ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed oo ay u jartay.
Sidoo kale Wasaaradda ayaa sheegtay inay qaadan karto go’aan marka si rasmi ah loo soo ogeysiiyo.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dubbe oo xalay saqdii dhexe ka hadlayay telefishinka Qaranka ayaa sheegay inay xiriirka u jareen Kenya, kuna amray in diblomaasiyiinta Kenya muddo 7 cisho uga baxaan Muqdisho, halka Diblomaasiyiinta Soomaaliya ka jooga Kenya ku wargeliyay inay dalka ku soo laabtaan.
Waxaa uu ku eedeeyay dowladda Kenya inay faragelin qaawan iyo xadgudub ku heyso madax banaanida dalka.
Bishii hore ayay aheyd markii dowladda Soomaaliya ay ku amartay Safiirkii Kenya inuu dalkiisa ku laabto, halka Safiirkii Soomaaliya u joogay Nairobi lagu amray inuu dalka ku soo laabto, tallaabadan ayaa aheyd mid Soomaaliya ay hoos ugu dhigeysay xiriirkii Kenya kala dhaxeeyay.
Previous articleFrench students can skip school to isolate themselves before Christmas, says the French Prime Minister
Next articleParis opera singers go digital after Covid-19 keeps arenas closed